Itoobiyaan Bosaaso ku soo Fooleh | maakhir.com
Itoobiyaan Bosaaso ku soo Fooleh
April 1, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Magaalada Bosaaso ayaa waxa ku soo foole ciidamo Ehtiopi-ah kuwaasi oo haatan la wado Diyaar garawgoodii iyo Goobihii la Dejin lahaa, Ciidamadaasi ayaa waxa la sheegay inay aad ula shaqayn doonaan Booliska Magaalada Bosaaso, walaw arinkaasi ciidama keenita uu beeniyay Cade Muuse hadana waxa si cad u qeexay Saraakiisha Ciidamada AMaan ee Puntland.
Magaalada Bosaaso ayaa la sheegay in la keenayo Ciidamo Ethiopia kuwaasi oo haatan xeryo ciidaan looga samaynayo Gudaha Magaalada Bosaaso, waxa la sheegay inay Ciidamaasi ay la shaqayn doonaan Boolidka Magaalada Bosaaso kuwaasi oo gacan ka siin doona xaaladaha Amaan ee markaasi soo cusboonaada.
Ciidamadaasi ayaa la sheegay inay Tiradoodu tahay ilaa 2000- Askari,kuwaasi oo la kala dejindoono Daafaha Magaalada Bosaaso, in kastoo ay jiraan hadan warar sheegaya inay Ciidamaasi qaarkood Degen doonaan Kaantaroolka Magaalada Bosaaso iyo qaar ka mid ah Saldhigyada magaaladaa Bosaaso.
Arinkaasi Ciidama keenida Magaalada Bosaaso ayaa waxa ka danbaysay ka dib markii ay Magaalada Bosaaso ku soo bateen Dilalka Joogtada ah iyo waliba falalka qaraxyada ah kuwaasi oo tira ka dhawor jeer Gil Gilay Gudaha Magaalada Bosaaso.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Cade Muuse lagu canaantay wax ka qabasha la”aanta Amaanka Gobolada Puntlad,isaga oo Cade Muuse ay Males Zanawi isla soo qaadeen adkaynta Amaanka iyo in Gacanta Loo soo galiyo Dawlada Ethiopia cid alaale iyo cidii lagu tuhmo inay xidhiidh la leeyihiin waxa ay ugu yeedheen Al –Shabaab.
Kulankii ay yeesheen Cade Muuse iyo Madaxwaynaha Ethiopia ayaa waxa ka soo baxaya warar hordhac ah kuwaasi oo daboolka ka qaadaya in Cade Muuse uu Dawlada Ehiopia ka dalbaday inay ka taageerto Baadhida Macadanta Gobolada oo ay Ehoipia ciidamadeedu ay galaan Goob kasta oo markaasi lays oran karo waxa ku jirta Macdan si ay ula dagaalamaan kooxaha diidan in la baadho khayraadkaasi.
« Shirkii wadamada Carbta ayaa la soo Afmeeray iyada oo Xaalada Dalka Somaliya aad loo lafa guray
Shaqaale AJaanib ah ayaa lagu Afduubay Koonfurta Dalka Somaliya »